Khin Maung Chin: အရောင်ရင့်ရင့်အမုန်းများ ၆ (ဇာတ်သိမ်း)
'' ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ.. ငါချစ်လို့ယူထားတာပဲ.ဘာလို့ကွာပေးရမှာလဲ..
ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးတောင်းပန်ကြည့်ပါသေးတယ်.... ဘာကြောင့်ကွာရှင်းပေးခိုင်းတာလဲလို့မေးရင်လဲအကြောင်းပြချက်မရေမရာနဲ့ဗျာ.... ကျနော်လေသူငယ်ချင်းတို့ယုံမလားမသိဘူးးးယောင်္ကျားတန်မဲ့အောက်ကျနောက်ကျခံပြီး
တောင်းပန်နေတာတောင် ကျနော်ကတောင်းပန်လေသူကပိုကဲလေဖြစ်လာတော့တာပါပဲ.... နောက်ဆုံးကျနော်လဲကျနော့်အစ်မကြီးကိုဖုံးဆက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းမေးကြည့်တော့ အစ်မကြီးက
အစ်မကြီးကလိမ်ညာမပြောတတ်တာကျနော်သိနေတယ်လေ... အရင်သူငယ်ချင်းတွေပြောတာတွေကြားတော့ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါလို့
ဒေါသထွက်နေတယ်၊မင်းအားရင်ဖုန်းဆက်ဖြစ်အောင်ဆက်နော်။ လူကြီးတွေကိုမရိုမသေလည်းမဖြစ်စေနဲ့၊ အခြေအနေအစအဆုံးကိုသေသေချာချာရှင်းပြလိုက်..ဟုတ်ပြီလားးးးဘာမှမကြောက်နဲ့နော်''
''ဟုတ်ပါတယ်ဖိုးဖိုးရယ်၊ကျနော်တို့လူငယ်ချင်းမေတ္တာမျှပြီးနှစ်ဦးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးထားပြီးပါပြီ။ ကျနော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါဗျာ၊ ကျနော်သားမှတ်မှတ်မယားမှတ်မှတ်
''ဒီမှာဟေ့ကောင်.. ငါတို့မြေးကနောက်နှစ်ဆို Pharmacy ဘွဲ့ရတော့မယ့်သူ၊ မင်းကဘာကောင်လဲ? ပြီးတော့ငါတို့မြေးမှာမိစုံဖစုံရှိနေတယ်၊ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေနေရတယ်၊
မင်းကမိမရှိဖမရှိကောင်ပဲ။ တူလားတန်လားဆိုတာမင်းမစဉ်းစားတတ်ဘူးလား?မင်းမို့လို့မှန်းရဲတယ်ကွာ... ဒီမှာငါပြောလိုက်မယ်..မင်းတို့လက်ထပ်ထားတာဘယ်နည်းနဲ့မှ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်
ဆိုပြီးဖုန်းချသွားတယ်လေ.... အဖိုးကြီးပြောတာတွေကိုတော့အသေးစိတ်မရေးပြတော့ပါဘူးဗျာ.. ခုကျနော်ပြောထားတာတွေထက်ပိုကြမ်းတမ်းတယ်လို့သဘောထားပေးပါ..
မိဘတွေရဲ့သားဖြစ်နေတာကအပြစ်ကြီးလို့ထင်နေပုံပဲ.. နှိမ်စရာလို့ယူဆထားပုံပဲ.. ငွေကြေးအနေနဲ့တော့ကျနော်ချို့တဲ့တာဝန်ခံပါတယ်...
ဒါကလဲချိုးနှိမ်ပြီးပြောလို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာဗျာ.. ဆင်းရဲတာကပဲစာရိတ္တညံ့ဖျင်းနေသလိုလို......... သြော် သံဝေဂယူစရာတွေပေါ့လေ..
အဲလိုလူကြီးသူမတွေကိုတော့ကျနော်ဒီနေရာကနေ ကန်တော့လိုက်ပါတယ်ဗျာ..... လူဂျီးတွေကိုမဟုတ်ဘူးနော်၊လူကြီးတွေကိုကန်တော့တာ.... (ဘယ်တွေရောက်ကုန်မှန်းမသိဘူးး) :D:D:D
နောက်နေ့ကြတော့ ကျနော်မိန်းမကကျနော့်ဆီအီးမေးလ်ပို့လာတယ်.. အဲဒီအထဲမှာလေဘယ်တော့မှ(ကျနော်အရင်ကထင်ထားတာပါ)ကျနော့်မိန်းမပါးစပ်ကထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး
(အဲဒီမေးလ်တွေအားလုံးကို Deleted ထားလို့ခုဖော်မပြနိုင်တာပါ)
Blockလုပ်ပစ်လိုက်တယ်...သူလည်းကျနော့်ကိုလုပ်လိုက်မှာပါ... ထားပါတော့လေ... နောက်ဆုံးတော့သူကနာမည်ကြီးနေတဲ့စပယ်ယာနဲ့ခိုးမပြေးပဲအဲဒီကားဒရိုင်ဘာနဲ့ခိုးပြေးကြရောတဲ့... တကယ်လုပ်သွားတာနော်..ကျနော်နောက်နေတာ၊ညာနေတာတစ်ခုမှမပါဘူးးး... မယုံလို့စုံစမ်းချင်တဲ့သူရှိရင်ဒီဘလောက်စာမျက်နာရဲ့အောက်ဆုံးက Chat Roll လေးထဲမှာပြောခဲ့ပါ။ နောက်ပြီးကျနော့်အီးမေးလ်လည်းရှိနေပါတယ်။
ဒီတော့မှသူတို့အထင်ကြီးနေတဲ့ Pharmacy ဘွဲ့ရှင်ကြီး၊မိစုံဖစုံရှင်ကြီးအကြောင်း၊
Pharmacy ဘွဲ့ပိုင်ရှင်ကြီးနဲ့ပြန်သဘောတူတော့မယ်ဆိုပဲ..ဟာဟ..ပလို့ဂျိ... သူတို့ကတော့ကျနော်ကအဝေးကြီးမှာ..ဘာမှသိမှာ၊ကြားမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့တွက်နေမှာပေါ့... ခုအချိန်ထိသူနဲ့ ဘာအဆက်အသွယ်မှမရသေးသလို ရဖို့လဲဆန္ဒမရှိတော့ပါဘူးဗျာ...
''' အစ်မရယ်..ကျနော်အိပ်လို့မပျော်ဘူးဗျာ.. ဘာမှလည်းစားလို့မဝင်ဘူး
ကျနော်ဆိုအားတာနဲ့ Gmailဖွင့်ပြီးကျနော်တို့နှစ်ယောက်အရင်က Chat ခဲ့တာတွေပြန်ဖတ်၊ ပို့ခဲ့ကြတဲ့မေးလ်တွေပြန်ကြည့်နဲ့ကျနော်လုံးလုံးရူးသွားခဲ့ရသလိုပါပဲဗျာ...
ကျနော်နဲ့လက်ထပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကအပျိုမဟုတ်ဘူးဗျ.. နားမရှုပ်သွားပါနဲ့ဦးနော်..... ကျနော်နဲ့ရည်းစားဖြစ်ပြီးနှစ်လလောက်ကတည်းက သူတို့ Pharmacy ကျောင်းရဲ့အစောင့်တယောက်
က ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှာသူ့ကို အနိုင်ကျင့်ခဲ့ဘူးတယ်တဲ့.... ခြောက်လကြာပြီးမှကျနော့်ကိုဖွင့်ပြောပြတယ်... ကျနော်ကလည်းညီမရဲ့ခန္တာကိုယ်ကိုကိုကြီးချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးညီမရယ်၊ညီမရဲ့လှပတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကြောင့်
ကိုကြီးချစ်ခဲ့တာပါ၊ခုဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့တော့.. ကိုကြီးညီမလေးကိုမမုန်းပါဘူး။ ခုလိုဖွင့်ပြောပြတဲ့အတွက်ညီမလေးကိုကျေးဇူးတင်သလို၊ပိုပြီးတော့လည်းချစ်လာမိပါတယ်လို့ပြောပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာပါဗျာ.တကယ်လည်းအဲဒီတုန်းကကျနော်သူ့ကို
ဆိုပြီးသနားစိတ်ဝင်ပိုပြီးတောင်ချစ်မိသွားပါတယ်ဗျာ... တဖက်ကလဲအားအင်ရှိတိုင်းအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့တချို့ယောင်္ကျားတွေကိုလည်းအရမ်းရွံသွားခဲ့တယ်လေ... ကျနော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဗျာ..
ဒီလောက်နားလည်ပေးပြီးအနစ်နာခံချစ်နေတဲ့သူကိုသူမို့လို့သစ္စာဖောက်ရက်တယ်၊ ယောင်္ကျားလေးတွေကြောင့်ဘဝပျက်သွားကြတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိပါတယ်..ဒုနဲ့ဒေးပါ..။အဲလိုပဲဗျသူတို့ မိန်းကလေးတွေလည်းယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်၊ဖျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲဗျာ... ဒါပါပဲ.. အဓိကပြောချင်တာကအဲဒီစကားလေးပါပဲ...
ကျနော်ရေးလိုက်တာကဇာတ်လမ်းလိုလို၊ဝတ္ထုတိုလိုလိုဖြစ်နေတယ်... ကျနော်ကိုယ်တိုင်စာရေးဆရာတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘာလဲဆိုတာခွဲမပြတတ်တာကိုနားလည်ပေးပါ. လိုရင်းကမည်သူမည်ဝါကိုမှ အထင်သေး၍၊(အထင်မကြီး၍)ဒီပို့စ်တွေကိုရေးထားတာမဟုတ်ပဲ
ရေးလိုက်မိတဲ့အရေးအသားလေးတွေအတွက် စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်...။
အမှန်ကတော့ကျနော့်ကိုယ်ပိုင်အားနည်းချက်တွေပါပဲ...။ကျနော်ချင်းလေးအရမ်းညံ့ပါသည်.. .. .. ..။
စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးမအားမလပ်တဲ့ကြားကအချိန်ပေးလာရောက်ဖတ်ရှု့တဲ့ချစ်သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကိုလေးနက်စွာနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါရစေ..။ ဒီ ''အရောင်ရင့်ရင့်အမုန်းများ''
ရှိသင့်တဲ့ရသတွေစုံလင်အောင်မရေးတတ်၊ မရေးနိုင်ခဲ့တာတော့ ကျနော့်အားနည်းချက်ပါ..